Hume City Council - Adeegyada adiga aad leedahay iyo tallaalka qoyskaaga
You are here : Home > Soomaali > Adeegyada adiga aad leedahay iyo tallaalka qoyskaaga
Goluhu wuxuu bixiyaa tallaalka carruurta jirta laba bilood iyo wixii ka weyn. Tallaalka carruurnimada waa bilaash lacag la'aan ah haddii aad heysato kaadhka Medicare. Tallaalka waxa laga helaya meelo aad u kala duwan iyo dhammaan Hume ugu yaraan toddobaad kasta oo sannadka ah.
Goluhu wuxuu bixin karaa qoraalka taariikhda Tallaalka/Shahaadada ee ah in la siiyo dugsiga ilmaha marka la diiwaangelinayo. Dugsigu wuxuu dooni doona inuu ogaado tallaalka ilmahaagu qaatay.
Caafimaadka Ilmaha iyo Hooyada
Adeega Caafimaadka Ilmaha iyo Hooyada wuxuu ka taageerayaa waalidiinta waalidnimada heerka hore ee kuritaanka, laga bilaabo dhalashada ilaa da'da afraad iyo badh, waxaan qasdeynaa inaan xoojino caafimaadka iyo fiyoobaanta bulshadeena. Wac Khadka taleefanka Dalbashada Caafimaadka Ilmaha iyo Hooyada 9205 2844
Dugsiga ka hor ( Kindhada)
Waxaan bixinaa adeega dugsiga ka hor ee carruurta jirta saddex iyo afar wax ka badan 30 goobood oo ah Hume oo dhan iyo waxaa sidoo kale 10 Dugsiga ka ho roo madax bannaan kuna yaal magaalaga. Kindhada waa tallaabada ugu horeeysa ee la higsanayo ee carruurta ka hor intaysan dugsiga bilaabin. Carruurtu waa inay afar jiraan 30 Abriil sannadka ay doonayaan inay tagaan kindhada Golaha.
(Xiriirka liiska kindhada)
Daryeelka Saacadaha Dugsiga Ka baxsan iyo Xannaanada carruurta.
Goluhu wuxuu bixiyaa afar xarumood oo xannaanada carruurta ah Hume oo dhan iyo 30 xannaano carruureed oo kale oo ka shaqeeya magaalada. Xarumaha xannaanada carruurta waxay bixiyaan xannaano iyo barnaamijyada waxbarashada ee loogu talagalay carruurta laga bilaabo dhalasho ilaa da'da lix sanno. Waxaan sidoo kale bixinaa Xannaanada Saacadaha Dugsiga ka baxsan, labadaba dugsiga ka hor iyo ka dib, ee ardeyda ku nool Magaalada Hume.
Xiriirka adeegyada Xannaanada carruurta ee Hume)
Xannaanada Fasaxa waa barnaamij ujeedadiisu tahay inuu ka caawiyo qoysaska xannaanada carruurtooda jirta da'da dugsiga hoose/dhexe inta lagu jiro fasaxyada dugsiga.
Waxaan sidoo kale leenahay Barnaamijka Fasaxa Dhalinyarada oo siiya nashaad dadka dhalinyarada ah ee shaqeeya, ku nool, wax ka barta ama ku ciyaara Magaalada Hume ee da'doodu tahay 12 ilaa 15 sanno.
Goluhu wuxuu siiyaa adeeg dhalinyarada loogu talagalay dadka dhalinyarada ah iyo qoysaskooda ee Hume oo dhan. Waxaan ku leenahay afar xarumood oo dhalinyaro Sunbury, Roxburgh Park, Craigieburn, oo bixinaya nashaad badan oo kala duwan oo loogu talagalay dadka dhalinyarada ah. Waxaan sidoo kale leenahay 13 skate iyo baaggaga MBX Hume oo dhan.
Shaqaalaha dhalinyarada ah waa la helayaa si ay u taageeraan una caawiyaan dadka dhalinyarada ah iyo qoysaskooda waxayna sameyn karaanu sii gudbinta hay'adaha kale haddii loo baahdo.
Goobaha Xarumaheena Dhalinyarada:
- Xarumata Dhexe ee Broadmeadows waxay ku taal 52-59 Pearcedale Parade
- Xarunta Dhalinyarada Sunbury waxay ku taal 51-53 Evans Street
- Xarunta Dhalinyarada Roxburgh Park waxay ku taal 75 Lakeside Drive
- Xarunta Dhalinyarada Craigieburn waxay ku taal 59 Craigieburn Road
Diiwaangelinta eyda iyo bisadaha
Haddii aad leedahay ey ama bisad, waxaa sharci ahaan lagaaga baahan yahay inaad ka diiwaangeliso xayawaankaaga aad korsato Golaha. Haddii aad ka soo guurtay goob kale halkaas oo xayawaanka aad korsato uu ka diiwaangashanaa, waxaad u baahan
doontaa inaad ka diiwaangeliso Golaha Magaalada Hume. Diiwaangelinta xayawaanka la korsado waxay anaga noo sahashaa in laguu keeno xayawaankaaga aad korsato haddii ay kaa lumaan. Dhammaan eyda iyo bisadaha waa in la diiwaangeliyaa laga bilaabo da'da saddex bilood diiwaangelintana waa in laga cusbooneysiiyaa Golaha 10 Abriil sannad kasta.
Adeegyada dadka da'da ah iyo dadka iimaha leh
Adeegyada taageerada bulshada iyo guriga ee Hume waxay u qabtaan adeegyo fara badan deganayaasha xaqa u leh ee ah dad waa weyn oo tamar daran, dadka iinta leh iyo xannaaneeyayaasha. Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan la xiriir Adeegeena Iinta
Updated : 4:07 PM, 16 December 2010